Munaasabad ku aaddan gabagabada wareegga koowaad ee barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo xalay lagu qabtay xarunta Daljir ee Bossaso. – Radio Daljir
Bossaso, Aug, 21 – Xaflad ballaaran oo ku aadan gabagabada wareegga koowaad ee barnaamijka Tartan iyo Tacliin iyo ku dhawaaqidda dugsiyada u soo baxay wareegga labaad ee barnaamijka ayaa xalay lagu qabtay xarunta radio Daljir ee Bossaso, taas oo ay ka soo qaybgaleen mas?uuliyiin ka kale socotay shirkadda isgaarsiinta ee Golis oo ay barnaamijka wada maalgaliyanayaan wasaaradda waxabarashada ee Puntland, daladda waxbarashada ahliga ah ee Pen iyo Radio Daljir.
Intii ay socotay munaasabadaasi ayaa waxaa laga sheekeeyey habsami usocodkii barnaamijka intii lagu guda jiray wareeggi koowaad ee xalay dhamaaday, waxaana laga jawaabay dhammaan cabashooyinkii jiray ee ka yimid dhinaca dugsiyada tartamayey oo qaarkood cabashooyinkaasi loo saxay.
Guddoomiyaha guddiga garsoorka ee barnaamijka Muuse Siciid Xasan ayaa ku dhawaaqay 12-ka dugsi ee u gudbay wareegga labaad iyo isku aadkooda.
Guddoomiye ku xigeenka daladda waxbarashada ahliga ah ee Puntland Max?ed Axmed Faarax oo ka mid ahaa mas?uuiliyiintii hadashay ayaa iftiimiyey faa?iidada barnaamijkani ulleeyahay bulshada ku taxan iyo dhinacyada ka qaybqaadanayaba, waxaa uu ka codsaday dawladda iyo shirkadaha ganacsiguba inay muruq, maal iyo maskaxba galiyaan waxbarashada.
Madaxa suuqgeynta ee shirkadda Golis Siciid Xuseen Ciid oo isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijkani yahay kan ugu ballaaran tartamada ay shirkaddu maalgalinayso, waxaana uu sharaxay sababta ay barnaamijkan u maalgalinayaan oo uu ku sifeeyey in shirkaddu ahmiyad gaar ah siinayso aqoonta. Maadama waxa maanta dunidu ku tartamayso ay aqoonta.
Ugu dambayn Agaasimaha guud ee idaacadda Daljir Axmed SH. Max?ed Tallman oo munaasbadaasi ka hadlay sida Radio Daljir uu ugu faraxsan habka quruxda badan ee barnaamijku u socdo, waxaana uu u mahadceliyey dhammaan dhinacyada ka qaybqaadanaya iyo dhagaystayaasha Radio Daljir. Dhinaca kale agaasimaha ayaa munaasabadaasi ka sheegay in Radio Daljir uu xarun cusub ka furay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galguduud taas oo shacabka gobolkaasi si diirran u soo dhaweeyeen.
Habeenka caawa ah ayaa waxa qaybta hore ee barnaamijka ku tartami doona Muntadda Qardho iyo Nugaal Garoowe, halka qaybta labaadna ay ku tartami doonaan Cumar Samatar Galkacyo iyo Burtinle Secendry.